ငါသာလျှင် ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အရှင်သခင်: 2011/03
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးလိုက်တဲ့စာ ဧရာဝတီ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိ
Daw Aung San Suu Kyi's letter to Irrawaddy
ဧရာဝတီကို စာတစောင် ရောက်လာပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးလိုက်တာပါ။
စာက ခက်ခက်ခဲခဲ ရောက်လာတာပါ။ ဘာကြောင့် အီးမေးလ် မပို့သလဲ? သူ့မှာ အင်တာနှေး ရှိနေပြီ မဟုတ်လား? လို့ မေးစရာပါ။ အင်တာနှေးက အင်တာပျက် ဖြစ်သွားလို့ လှေကြီးထိုးထိုးရိုးရိုးဆက်သွယ်ရေးအတိုင်း စာပို့လိုက်ခြင်းပါ ဆိုပဲ။ စာတိုက်ကပို့ရင် စိတ်မချလို့ လူလွှတ်ပြီး ပို့ရခြင်းပါ တဲ့။
စာက ဘယ်လိုခက်ခက်ခဲခဲ ရောက်လာသလဲ ဆိုတော့ -
စာယူလာသူက ပထမတော့ မြ၀တီ-မဲဆောက်လမ်းကနေ ဧရာဝတီရုံးကို လာဖို့ စီစဉ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကရင်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ လမ်းကြောင်း ပြောင်းလိုက်တယ်၊ ရှမ်းပြည်ဘက်က သွားမယ်ပေါ့လေ။
သွားရော ရှမ်းပြည်ဘက်ကနေ။ ကံဆိုးချင်တော့ သူ ကျိုင်းတုံက အထွက်မှာ ငလျင်လှုပ်တဲ့ရက်နဲ့ သွားတိုးတယ်။ ဒါကြောင့် နယ်စပ်ကို ချက်ချင်း ဖြတ်လို့ မရဘူး၊ ငလျင်ကြောင့် ကားလမ်းတွေလည်း ပိတ်သွားတယ်မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့၊ စာက ခက်ခက်ခဲခဲ ရောက်လာတာပါ ဆိုမှ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို စာရေးလာတယ်၊ ဧရာဝတီကို စာရေးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို "နိုင်ငံတော်" က သဲ့သဲ့ ကြားသွားတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တာဝန်သိလုပ်သားပြည်သူတဦးဆီကနေ ကြားသွားတာပါ။ ဒီတော့ အဲဒီစာယူလာသူကို အသေရရ အရှင်ရရ ဖမ်းပြီး စာကို နေပြည်တော် ပို့ဖို့ အသည်းအသန် လုပ်ကြတယ်။
အဲဒီလူကို ကျိုင်းတုံကအထွက် ၅ မိုင်အကွာမှာ လိုက်လို့မှီသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငလျင်လှုပ်တယ်။ အကြီးအကျယ်ပဲ။ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့မှာပေါ့။ တံတားတွေပျက်စီး၊ ကတ္တရာလမ်းမကြီးတွေ ဟက်တက်ကွဲ။
အဲဒီလူနောက်က လိုက်လာတဲ့ဆရာတွေခမျာ ကံမကောင်းရှာဘူး၊ ဟက်တက်ကွဲတဲ့ ကားလမ်းမထဲ ပြုတ်ကျကြတယ်။ အင်တာနက်မှာ တက်လာတဲ့ ပုံတွေထဲမှာ တွေ့လိမ့်မယ်၊ လူတချို့ ကားလမ်းမအကွဲထဲ ငုံ့ကြည့်နေကြတာ။ အင်း - ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီလူတွေ ခုချိန်ထိ ပြန်ပေါ်မလာဘူးလို့ ဆိုတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ စာက ဧရာဝတီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတယ်။
စာကိုရော လူကိုရော မမိလိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းက နေပြည်တော်ကို ရောက်သွားတယ်။ နေပြည်တော်က ပုခုံးရွှေရောင်တောက်နေသူတွေ ဒေါသောင်းကျန်းသူထပါလေရော။
ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ပြောတယ် - မပူနဲ့ ကျနော်မျိုးကြီးမှာ အိုင်ဒီယာတခု ရှိတယ်ပေါ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ သူ့အိုင်ဒီယာကို အကောင်အထည် ဖော်လိုက်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတယ် ဧရာဝတီကငနဲတွေအတွက် ဆိုတဲ့ စာတစောင်က အင်တာနက်မှာ ပွစိတက်သွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ စာအစစ်က ဂုမ္ဘာန်တထောင် နဲ့ လွယ်မွေငလျင်တွေ တားထားတဲ့ကြားထဲက နယ်စပ်ကို ဖြတ်လာတာပေါ့။
စာကို စကင်ဖတ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဖတ်ပေတော့ ဧရာဝတီ ပရိသတ်များ။
အင်း - အဲဒီလို ထင်စရာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ရေးမထားတဲ့စာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပို့ပါ့မလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီစာကို လျှို့ဝှက်မင်နဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် ရေစိမ်ပြီးဖတ်မှ စာလုံးတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘာတွေရေးထားလဲ သိချင်ရင် ပရင့်အောက်၊ ရေနည်းနည်းစိမ်ပြီး ဖတ်ပါလေ။ ။
အမြင်မျိုးစုံနဲ့တုံ့ ပြန်လာတာတွေကို အခုလို တွေ့ ရလေရဲ့ ။
ဒီလိုရောချတဲ့ ပိုစ့်မျိုးတွေ မတင်ပါနဲ့ဗျာ
ဒီ ဘလော့ဂ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ဖတ်နေလို့ပါ
ပဟေလိဆိုတာကြီးလည်း တော်တော် တန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်
မကြိုက်တာ ဘာမှ မသိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဧရာဝတီသို့ ဒေါ်စုပေးစာဆိုပြီး အင်ကြီး ထွက်နေတယ်။ ဒါကို ပြန်ရိထားတာ။
ကျနော်ကတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ အတည်အခန့်ပြန်ရေးရင် အရေးတယူ ရှိနေဦးမယ်။ ခုတော့ မှတ်ဟပေါ့ ....
March 27, 2011 11:30 AM
I dont think you guys should post suchacheap post. should act professionally.
... how nice your " satire " is ..Lol
ပြီး၇င် ဒီသေ၇ာ်စာ ပြန်ဖတ် -
March 27, 2011 12:33 PM
yangonthu... အဲဒီစာကိုလည်း ကျော်ဆန်းဖန်တီးထားတာပါလို့ ဘယ်လို သက်သေအထောက်အထားတွေ ရှိလို့ယုံရမှာလဲ။
အပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျား မီဒီယာသမားတွေက ခိုင်လုံတဲ့သတင်းလား ထွင်လုံးလားဆိုတာ ခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အဲဒီစာက ဒေါ်စုဆီကသာလာမယ်ဆိုရင် NLDဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုသွားကြည့်ကြည့်ပါ http://burmese.nldburma.org/
အင်း အစက Irrawaddy website အတိုက်ခံရတာလိမ်တယ်လို့ထင်တာ ခုတော့တကယ်ပေါ့. ဇတ်လမ်းအဆက်နဲ့များဖန်တီးနေ မလား???
please do not use Daw Aung San Su Kyi's name in this kind of article.People might think it is real and and scroll down the page like me.After that it is likeajoke.Please be careful you guys are not funny comedy writer.
please make sure Ayarwaddy post this comment because I had posted2comment about irrawaddy articles but never been appeared on your web page.
no value & outside acceptable standard, should reject this
can't u see the label?
it says "Labels: Satire, သရော်စာ"
I thik, Daw Suu will laugh after reading this post.
come on guys this is blog should be fun and get some knowledge who are serious reader go .com/org that official site. i like this kind of post anyway enjoy reading irrawaddy site and blog...
ရှင်းလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်လေ၊ http://myanmarexpress.blogspot.com/2011/03/blog-post_25.html
အဲဒီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးတယ်ဆိုတဲ့စာကို သွားကြည့်လိုက်ကြပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မှတ်နဲ့ စာရေးထားတဲ့ နောက်ခံ အရောင်ကို သေသေချာချာလေး ဂရုစိုက်ကြည့်ရင် အဖြေပေါ်လာပါမယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်မှတ်တွေ ဘယ်နေရာကနေ ဖြတ်ယူ ဖြတ်ယူ ရနေတာပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဆိုတာသိသာတာဘဲလေ။ မသိကြတာ ကတော့ စာကိုစာလိုမဖတ်ဘဲ သတင်းလိုဖတ်ကြတဲ့
အုပ်စုထဲရောက်သွားလို့ပါ။ ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ် ကစာစုံတင်ပါတယ်လို့
ဘယ်လိုပင်ဆိုငြား အများအမြင်နဲ့ ခံစားမှု ဖီလင်ကတော့ သတင်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်
တခုအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုထားကြပြီး ဖြစ်နေလို့လဲ ခုလိုဖြစ်ကုန်တာပါ။
ကော်မန့်တွေအစုံဖတ်ကြည့်တော့ သိတဲ့သူတွေ ကလဲ အသေအချာကိုသိနေကြတာ..
နှစ်သက်ကြတာ တွေ့ရတာမို့ "သရော်စာ" လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရင်
အရသာပျက်သွားမှာမို့ ဒီအတိုင်းဘဲကောင်းပါတယ်လေ..။ ဆက်ရေးပါ.. ဆဲလိုသူကဆဲ
The best satiric response to the Junta thugs' ridiculous and fraudulent letter being accused as written by DASSK.
Those who disapprove this post maybe because they know neither the true story nor are lack of humor to brush off this kind of ridiculous accusations.
waste of time, I only know this at the end of the post. such as waste of time.
ပုံကတော့ အရမ်း ကောင်းတယ်။ ထိုင်းစစ်သားတယောက်ရဲ့ နာရေးမှာ ရိုက်ထားတာ။ ရုပ်ကလာပ်၊်အအုပ်ထားတဲ့ ထိုင်းအလံ၊ ဂါရ၀ပြုတဲ့ ရဲဘော်- ကြည့်ရတာ ပြည့်စုံတဲ့ ဓာတ်ပုံပဲ။
ရေးချင်တာကတော့ ဂါရ၀ပြုသူရဲ့ လက်အနေအထားပါ။
မြန်မာပြည်မှာလိုပါပဲ - တခုခု ပေးတဲ့အခါ ယူတဲ့အခါ လေးစားသမှု ပြုချင်ရင် နောက်လက်တဘက်က ပေး/ယူတဲ့လက်ကို သွားထိတယ်။
သံအမတ်ဟောင်းတယောက်ကတော့ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမကြိုက်ဘူး ဆိုပဲ။ နိုင်ငံတကာမှာ မရှိဘူး၊ အူကြောင်ကြောင်နိုင်သတဲ့။
ကြောင်ပါစေလေ၊ ဒါ ယဉ်ကျေးမှုတမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။ ဘယ်တုန်းကပေါ် ဘယ်ဒေသက ပေါ်သလဲတော့ မသိပါဘူး။
A Thai soldier pours water onto flowers placed in the hand ofaslain colleague shot dead in an attack by suspected separatist militants on March 21, duringaBuddhist ceremony atatemple in Thailand's restive southern province of Narathiwat on March 22. 2011. Shadowy Islamic militants have waged an uprising in Thailand's southernmost region bordering Malaysia since early 2004, leaving more than 4,400 people dead, including both Muslims and Buddhists. Violence has recently intensified in the region, where critics accuse the government of failing to address the grievances of Thailand's Malay Muslim minority, including alleged abuses by the military.
ကိုနေ၀င်းအတွက် ဘလော့ တခု အခုပဲ လုပ်လိုက်တယ်။
ပို့ စ် ၁၀ ခုလောက် ရှိမယ်။
သတင်းတွေ သီချင်းတွေကို ဇော်ဂျီဝမ်းတန်ခိုးနဲ့ရှာလိုက်တာ စုစုပေါင်း အချိန် ၁ နာရီ ကျော် ကြာတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် အထင်ကြီးသွားတယ်။း)
အချက်အလက် စုတဲ့ ဘလော့တခု လုပ်ရတာ တယ်မြန်ပါလားပေါ့လေ။
ဘလော့အကြောင်း မောင်ရစ် နဲ့ ဝေမိုး ကို ပြောလိုက်တယ် အွန်လိုင်းကနေ။ ဒါကြောင့် ထိုင်း နဲ့ယူအက်စ်ကနေ ၀င်ကြည့်သူ ရှိတယ်လို့ ဘလော့စပေါ့ စစ်တမ်းမှာ တွေ့တယ်။ ထူးတာက အင်ဒိုက ပရိသတ် ၃ ယောက် ဆိုတာပါပဲ။
ဘယ်လို ဘယ်လို ရောက်သွားကြတယ် မသိ။
ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြွားတဲ့ post တခု တင်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ ဒါပါပဲ။
မေဆွိသေဆုံးသည့် သတင်း သွက်သွက်ခါအောင် မှားယွင်းဟုဆို
မေဆွိ သေဆုံးခြင်း မရှိကြောင်း လူအများအပြားကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ရေးထားသောသတင်း
အဆိုတော်မေဆွိ သေဆုံးသည်ဟု ဧရာဝတီတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းမှာ မှားယွင်းနေကြောင်း မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် The Voice ဂျာနယ်က ဆိုသည်။
“သတင်းက လုံးဝ မှား” သည်ဟု သရုပ်ဆောင် အရိုင်းမင်း၊ ဒါရိုက်တာ ညီညီထွန်းလွင်၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရုံးမှ ဦးချစ်ဆွေ၊ မေဆွိ၏ တူမ စသည့် ၄ ဦးကို ကိုးကားပြီး ဂျာနယ်တွင် ရေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသတင်းမှားနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ ညီညီထွန်းလွင်က ဧရာဝတီကို ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်သည်။
“သတင်း မှန်မမှန် အသေအချာတော့ လုပ်သင့်တာပေါ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဧရာဝတီကမူ ၎င်းတို့ဝက်ဆိုက် အဖောက်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုသတင်းမှားကို Hacker (များ) က ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ရှင်းလင်းထားသည်။ ထိုသတင်းကိုလည်း ပြန်လည် ဖြုတ်ချခဲ့သည်။
၀က်ဆိုက် အဖောက်ခံရသည်ဟူသော အချက်ကို မယုံကြည်သူလည်း ရှိသည်။ အဖောက်ခံရပါက ၂၄ နာရီအတွင်း နာလန်ထူနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပညာရှင်တဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ဂျာနယ်တွင် ကိုးကားထားသည်။
“မေဆွိသတင်းမှာတော့ ဧရာဝတီက သတင်းကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ ပြန်ဖြုတ်ချခဲ့တာ တွေ့ရတယ်” ဟု နည်းပညာကုမ္ပဏီတခု၏ system engineer ဦးဇော်ရဲမြင့်က The Voice ကို ပြောသည်။
သူ့ ဘလော့ http://thitkaungeain.blogspot.com/ မှာ ဓာတ်ပုံ ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ CBox ကို တလက်မ ဆွဲချဲ့လိုက်တယ်။
ဇော်ဂျီဝမ်း ၀င်အောင်လည်း လုပ်လိုက်တော့ စာလုံးတွေ ပုံမှန် ဖြစ်နေပါပြီ။
ပုံဟောင်းက ကဗျာဆရာနဲ့ ပိုတူတယ်။ ဆံပင်ရှည်လို့။
BSN မှာ သူ့အင်တာဗျူး ပါလာတာတောင် မပြောဖြစ်သေးဘူး)
ဒီမှာ အသစ် မရေးတာကြာပြီမို့ တခုခု ရေးလိုက်တာပါ။
ဆောင်းရယ် နှင်းရယ် နယ်မြေသစ်ရယ်
အရင်တပတ်က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတချို့။
နှင်းကျကျ နေပူပူ အမြဲပျော်သူတွေကတော့ သူတို့ပါပဲ။
မိုးရွာနေရာကနေ နှင်းကျလိုက်တော့ အအေးလွန်သွားတယ်။ မိုးရေစက်တချို့ မြေပေါ်မရောက်ခင် ခဲသွားတယ်။
ကြည့်ကောင်းလို့ ရိုက်လိုက်တာပဲ။ မရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပညာတွေ မထုတ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား။
ဘယ်သွားသွား အပင်တွေက တူနေတယ်။ ပလပ်စတစ်လောင်းထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ နေထွက်လာတော့ အမြင် ဆန်းနေပြန်ရော။
ကိုယ့်အတွက် ငြီးငွေ့စရာ ဒေသ ဆိုတော့ ရှုခင်းတွေကို ကြံဖန်ပြီး ခံစားရတယ်။ အင်း - တကယ်လည်း လှပါတယ်လေ။
ကော်ပြားကာ အိမ်ဖြူဖြူမှာ အုတ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ မီးခိုးခေါင်းတိုင်တွေ့ရင်တော့ ဒါ အိမ်ဟောင်းကို အိမ်ကောင်း ပြန်လုပ်ထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဓာတ်ငွေ့သုံးအပူပေးစက် ခေတ်မစားခင်က မီးလင်းဖိုတွေ အားကိုးရတယ် ထင်ပါရဲ့။
အိမ်အတွင်းပိုင်း မြင်ကွင်း။ အိမ်ထဲမှာတော့ အပူစက်အားကိုးနဲ့ နွေးတယ်။
ကျနော်သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာ ၂ လုံး။
တလုံးက နှေးတယ်။ တလုံးက ရပ်သွားတတ်တယ်။
ကလေးတွေကတော့ သူတို့သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဂိမ်း အတွက် ဒီကွန်ပျူတာတွေကို ကျနော်နဲ့ အပြိုင် သုံးကြတယ်။
ဒါပါပဲ။ အသစ် မတင်တာ ၁၀ ရက်ကျော်ပြီမို့ ဟိုလျှောက်ရေး ဒီလျှောက်ရေး တင်လိုက်တာပါ။
နှင်းကျတာ သွားရေးလာရေး ခက်တယ်။
စကားမစပ် ပြောရအုံးမယ်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဒီဘလော့က ပို့စ်တွေ ဒီနေ့က စပြီး တက်နေပါပြီ။ နယ်ချဲ့လိုက်တာလေ သူများတွေလို။
ဧရာဝတီမှာ မနေ့ က ရေးလိုက်တဲ့ သရော်စာ - ဗိုလ်ကျော်ဆ...